ကိုဗစ် ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို သတ်မှတ်ရက် မှာ မကျင်းပနိုင်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ? – Let Pan Daily
ကိုဗစ် ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို သတ်မှတ်ရက် မှာ မကျင်းပနိုင်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ?
ဖတ်ကြည့်ပြီး စိတ်အေးထားစေ ချင်… လွှတ်တော်သက်တမ်း ကုန်တဲ့အထိ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်လျှင်…
ရွေးကောက်ပွဲ အချိန်မှီ မကျင်းပနိုင်ရင်… လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်က သက်တမ်း (၅)နှစ် ပြည့်ခါနီး ပါပြီ။ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှလို့ ကိုဗစ် သက်ဆိုးရှည်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မရအောင် ဒုက္ခပေး နေဦးမယ် ဆိုရင် သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ စစ်လော်ဘီတွေက ရွေးကောက်ပွဲ အချိန်မှီ မလုပ် နိုင်ရင် လက်ရှိခြေဥအရ ကာလုံကို အာဏာအပ်ရမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ မှားပါတယ်၊ ကာလုံကို အာဏာအပ်စရာ လုံးဝ မလိုပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။
(၁) လက်ရှိ သမ္မတ နဲ့ ဒု-သမ္မတတွေ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားပေမယ့် သမ္မတအသစ်ကို ရွေးချယ်ပြီးတဲ့ အထိ ခြေဥ ပုဒ်မ (၆၁-ခ) အရ ဆက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင် ပေးရပါမယ်။
(၂) ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ ဒု-ဝန်ကြီးတွေရဲ့ သက်တမ်းက သမ္မတနဲ့ အတူတူ ဖြစ်တယ်လို့ ပုဒ်မ (၂၃၅-က)မှာ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့လဲ သမ္မတအသစ် ရွေးပြီးချိန် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် ကြရပါမယ်။ အခြား ရှေ့နေချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ် စတဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် ရာထူးတွေရဲ့ သက်တမ်းကလဲ သမ္မတနဲ့ အတူတူပါပဲ။
(၃) တိုင်း ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဝန်ကြီးတွေရဲ့ သက်တမ်းကလဲ သမ္မတနဲ့ အတူတူ ဖြစ်တယ်လို့ ပုဒ်မ (၂၆၂-ဍ) မှာ ဆိုပါတယ်။ သူတို့လဲ သမ္မတအသစ် ရွေးပြီးချိန်အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင် ကြရပါမယ်။
(၄) ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌတို့က လွှတ်တော် သက်တမ်း ကုန်သွားပေမယ့် နောက်လွှတ်တော် အသစ် ဖွဲ့စည်းတဲ့ အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ပေးရမယ်လို့ ပုဒ်မ (၁၁၃-က)မှာ ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေတော့ မပါဘူး။ ဆိုလိုတာက လွှတ်တော် (၂)ရပ်လုံး ကတော့ သက်တမ်းကုန်တာနဲ့ ပြီးပြီပေါ့။
ဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အချိန်မှီ မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်က နောက် အစိုးရသစ် ဖွဲ့ချိန်အထိ ဆက်လုပ် ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောစရာ ရှိတာက လွှတ်တော် မရှိတဲ့ အတွက် ဥပဒေ အရပ်ရပ် ပြင်တာ၊ အသစ်ပြဌါန်းတာတွေ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ တည်ဆဲ ဥပဒေနဲ့သာ သွားရမှာပါ။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်သွားလို့ ဘတ်ဂျက် အသစ်တင်စရာ လွှတ်တော် မရှိသေးဘူး ဆိုရင်လဲ ဘတ်ဂျက်ဟောင်း ခွင့်ပြုချက်အတိုင်း သုံးစွဲခွင့် ရှိတယ်လို့ ပုဒ်မ (၂၂၂) မှာ ခွင့်ပြု ထားပါတယ်။
ကာလုံ ခေါ်တာ မခေါ်တာ ကတော့ သမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ။ သူ မခေါ်ချင် မခေါ်ဘူး၊ အာဏာ အပ်ဖို့ဆိုတာတော့ အဝေးကြီး။ ဝေဖန်ဖို့နဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ကိုဗဈ ကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကို သတျမှတျရကျ မှာ မကငျြးပနိုငျရငျ ဘာတှေ ဖွဈလာမလဲ?
ဖတျကွညျ့ပွီး စိတျအေးထားစေ ခငျြ… လှတျတျောသကျတမျး ကုနျတဲ့အထိ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျလြှငျ…
ရှေးကောကျပှဲ အခြိနျမှီ မကငျြးပနိုငျရငျ… လကျရှိ အစိုးရနဲ့ လှတျတျောက သကျတမျး (၅)နှဈ ပွညျ့ခါနီး ပါပွီ။ ကံမကောငျး အကွောငျးမလှလို့ ကိုဗဈ သကျဆိုးရှညျပွီး ရှေးကောကျပှဲ လုပျမရအောငျ ဒုက်ခပေး နဦေးမယျ ဆိုရငျ သကျတမျးကုနျသှားတဲ့ အာဏာပိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှေ ဘယျလို လုပျကွမလဲ။
စဈလျောဘီတှကေ ရှေးကောကျပှဲ အခြိနျမှီ မလုပျ နိုငျရငျ လကျရှိခွဥေအရ ကာလုံကို အာဏာအပျရမယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ မှားပါတယျ၊ ကာလုံကို အာဏာအပျစရာ လုံးဝ မလိုပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲ။
(၁) လကျရှိ သမ်မတ နဲ့ ဒု-သမ်မတတှေ သကျတမျး ကုနျဆုံးသှားပမေယျ့ သမ်မတအသဈကို ရှေးခယျြပွီးတဲ့ အထိ ခွဥေ ပုဒျမ (၆၁-ခ) အရ ဆကျပွီး တာဝနျထမျးဆောငျ ပေးရပါမယျ။
(၂) ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး၊ ဒု-ဝနျကွီးတှရေဲ့ သကျတမျးက သမ်မတနဲ့ အတူတူ ဖွဈတယျလို့ ပုဒျမ (၂၃၅-က)မှာ ဆိုပါတယျ။ ဒီတော့ သူတို့လဲ သမ်မတအသဈ ရှေးပွီးခြိနျ အထိ တာဝနျထမျးဆောငျ ကွရပါမယျ။ အခွား ရှနေ့ခြေုပျ၊ စာရငျးစဈခြုပျ စတဲ့ နိုငျငံတျောအဆငျ့ ရာထူးတှရေဲ့ သကျတမျးကလဲ သမ်မတနဲ့ အတူတူပါပဲ။
(၃) တိုငျး ပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျနဲ့ ဝနျကွီးတှရေဲ့ သကျတမျးကလဲ သမ်မတနဲ့ အတူတူ ဖွဈတယျလို့ ပုဒျမ (၂၆၂-ဍ) မှာ ဆိုပါတယျ။ သူတို့လဲ သမ်မတအသဈ ရှေးပွီးခြိနျအထိ တာဝနျ ထမျးဆောငျ ကွရပါမယျ။
(၄) ပွညျထောငျစု လှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ နဲ့ ဒု-ဥက်ကဋ်ဌတို့က လှတျတျော သကျတမျး ကုနျသှားပမေယျ့ နောကျလှတျတျော အသဈ ဖှဲ့စညျးတဲ့ အထိ တာဝနျ ထမျးဆောငျပေးရမယျလို့ ပုဒျမ (၁၁၃-က)မှာ ဆိုပါတယျ။ ကနျြတဲ့ ကိုယျစားလှယျတှတေော့ မပါဘူး။ ဆိုလိုတာက လှတျတျော (၂)ရပျလုံး ကတော့ သကျတမျးကုနျတာနဲ့ ပွီးပွီပေါ့။
ဒီတော့ ရှေးကောကျပှဲ အခြိနျမှီ မလုပျနိုငျခဲ့ရငျ အစိုးရ အဖှဲ့အစညျး အဆငျ့ဆငျ့က နောကျ အစိုးရသဈ ဖှဲ့ခြိနျအထိ ဆကျလုပျ ကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပွောစရာ ရှိတာက လှတျတျော မရှိတဲ့ အတှကျ ဥပဒေ အရပျရပျ ပွငျတာ၊ အသဈပွဌါနျးတာတှေ လုပျနိုငျမှာ မဟုတျဘဲ တညျဆဲ ဥပဒနေဲ့သာ သှားရမှာပါ။ ဘဏ်ဍာရေးနှဈ ကုနျသှားလို့ ဘတျဂကျြ အသဈတငျစရာ လှတျတျော မရှိသေးဘူး ဆိုရငျလဲ ဘတျဂကျြဟောငျး ခှငျ့ပွုခကျြအတိုငျး သုံးစှဲခှငျ့ ရှိတယျလို့ ပုဒျမ (၂၂၂) မှာ ခှငျ့ပွု ထားပါတယျ။
ကာလုံ ချေါတာ မချေါတာ ကတော့ သမ်မတရဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့ပါ။ သူ မချေါခငျြ မချေါဘူး၊ အာဏာ အပျဖို့ဆိုတာတော့ အဝေးကွီး။ ဝဖေနျဖို့နဲ့ ဆငျခွငျဖို့ ဖွဈပါတယျ ခငျဗြား။
ဆန်ဒပွပှဲ မှာ ရဲဖကျ မှ အသုံးပွုလာသော Water Cannon (ရအေမွှောကျ) အ ကွောငျး တစတေ့စောငျး
သိုလှောငျ ရလှယျပွီး စြေးသကျသာ တဲ့ Oxford ကာကှယျ ဆေးစမျးသပျမှု ၉၀% အောငျမွငျ
မှတ်ပုံတင် မရှိတဲ့ ဖုန်းဆင်းမ်ကဒ်တွေ ကြောင့် ဖြစ်လာသည့် တရာခံ မပေါ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ